Ambodivona : Lehilahy maty voatifitra sy voaendaka – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2015 → octobre → 21 → Ambodivona : Lehilahy maty voatifitra sy voaendaka
Ambodivona : Lehilahy maty voatifitra sy voaendaka
Redaction Midi Madagasikara 21 octobre 2015 0 Commentaire
Omaly talata vao maraina be, nisy asan-jiolahy nahafatesana olona teny Ambodivona, eny amin’ny fihantsonan’ny taxi-brousse avy any amin’ny faritra. Fantatra, araka ny vaovao voaray fa lehilahy iray no maty voatifitra sy voatsatoka antsy. Lasan’ireo mpanendaka avokoa ny vola tany aminy. Nentina tany amin’ny tranom-paty Ampefiloha ny razana rehefa avy nanao ny fijerena ifotony ny mpitandro filaminana.
Olona roa, lahy avokoa, no tonga vao mariana be teny Ambodivona ny talata teo. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa rehefa niala ny fiara fitaterana izy ireo dia nikasa hitady tranom-bahiny hatoriana. Tamin’izay fotoana izay indrindra anefa no nisy dimy lahy nitondra basy ny zavamaranitra nanatona azy ireo. Tsy nisy ny resaka be fa avy hatrany dia notakian’ireo mpanendaka ny vola tany amin’ireto olona ireto. Marihina, hoy hatrany ny vaovao fa avy any Befandriana Avaratra izy ireo, tonga hividy entana aty an-drenivohitra. Raha voa nahita ireo mpanendaka ny iray tamin’ireo iantsena dia namoaka ny vola tany aminy izay mitentina an-tapitrisa mahery. Avy hatrany moa dia nalain’ireo mpangalatra izany. Ilay faharoa kosa teo anatrehan’izany niezaka nandositra. Tsy nisalasala ireo jiolahy fa tonga dia nitifitra ary voa teo amin’ny lamosiny io. Tsy vitan’izany fa rehefa tsy afaka dia noleran-dry zalahy antsy. Maty rehefa afaka fotoana fohy ity olona ity. Nalain’ireo bandy mpanendaka avokoa ny vola tany aminy. Raha vao azaon’ireo olon-dratsy ny vola dia lasa nandeha izy ireo, hoy hatrany ny vaovao.
Lasibatry ny mpanendaka sy ny jiolahy isan-karazany ireo olona avy any amin’ny faritra tonga eto an-drenivohitra hividy entana. Tsy vao sambany no nadrenesana asan-jiolahy mahakasika izany fa efa imbetsaka. Anisan’ny toerana fahatongavan’ny mpividy entana ny eny Ambodivona. Tamin’ity indray mandeha ity anefa, nahavariana ny mpitazana ny nahafantaran’ireo mpanendaka ny fahatongavan’ireo olona roa. Ny mpitazana mihevitra fa ankeviny efa nisy nanome vaovao an’ireo mpanendaka ireo, satria tonga dia izy roa no lasibatra.